आज चन्द्रागिरि हिल्सको शेयर खरीद चाप उच्च हुँदा मूल्यमा उच्च वृद्धि – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार १२:५२ Basanta Khanal	0 Comments	chandragiri
२५ चैत, काठमाडौं । बुधबार चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनीको शेयरमूल्य २५ रुपैयाँ नाघेको छ । आज कारोबार सुरु केहि समय अवधिसम्म कम्पनीको शेयरमूल्य १६१ रुपैयाँले बढेर २५०५ रुपैयाँ पुगेको हो ।यो समाचार तयार पर्दा चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनीको शेयरमूल्य ६ दशमलव ८७ अर्थात् प्रतिकित्ता २१६१ रुपैयाँले बढेर २५०५ कायम भएको हो ।
आज कम्पनीको शेयर खरीद चाप उच्च हुँदा मूल्यमा उच्च वृद्धि देखिएको छ ।
← स्पेशल प्रि ओपनमा कतिमा भयाे ज्योति लाइफको पहिलाे कारोबार?(हेर्नुहोस)
सेयर बजारले विस्तारै तय गर्दैछ गति : कुन समूहमा देखियो बढी आकर्षण ? →
अब कोभिड उपचार सरकारी अस्पतालमा मात्रै, परीक्षण शुल्क १ हजार